Yusuf Indhacadde, wasiiru dawlaha gaashaandhiga ee dawlada federaalka ah, oo ka badbaaday isku day dil. – Radio Daljir
Yusuf Indhacadde, wasiiru dawlaha gaashaandhiga ee dawlada federaalka ah, oo ka badbaaday isku day dil.
Febraayo 15, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Feb 15 ? Wasiiru dawlaha gaashaandhigga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacadde ayaa maanta ka badbaaday qaraxyo xiriir ah oo lagu damacsanaa in lagu khaarajiyo.
Wasiirka ayaa kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay isla markaana marayey waddada Makka Al-mukarama, waxaa lagu weeraray saddex qarax oo iskgu xigxigay kuwaasi oo labo ka mid ah lagu soo rakibay baabuur halka midka kalana lagu soo qariyey gaari gacan waddada dhinaceeda la dhigay.
Qaraxyada oo daqiiqado gudahood wada dhacay, ayaa la tilmaamay in lala bartilmaameedsanayey wasiiru dawlaha gaashaan-dhigga Soomaaliya Indha-cadde inkastoo aysan waxba ka soo gaarin, hase ahaatee qaraxydaasi waxaa ay gaysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawacba iskugu jira mana jirto cid si rasmi ah u caddayn karta khasaaraha dhabta ah.
Wasiirka, oo shir jaraa?id ku qabtay magaalada Muqdisho kana warbixiyey sida wax u dhaceen ayaa sheegay labo ka mid ah illaaladiisu in ay ku dhaawacmeen weeraradaasi khasaaro xagga gaadiidka ahna ay soo gaartay.
Wasiirku, waxaa uu sheegay in ay jireen khasaaro soo gaaray dad shacab ah oo marayey goobta ay wax ka dhaceen iyo guryo iyo gaadiid ku burburay halkaasi.
Dad goob joogayaal ah oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir, ayaa sheegay in ay arkeen meyd ugu yaraan 3 qof iyo dhaawacyo badan oo ku waxyeelloobay qaraxyadaasi hase ahaatee aysan caddayn karin tirada iyo ciddii ay ka tirsanaayeen,
Waa markii 2-aad oo wasiiru dawlaha gaashaan-dhigga Indha-cadde uu ka bad-baado isku day lagu doonayey in lagu khaarajiyo.
Saddex qof oo xalay siyaabo kala duwan loogu dilay Boosaaso & bilesyka oo baaritaanno wada.